Madaxweynaha oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in tirada Ciidamada xoogga dalka la yareynayo | Xaqiiqonews
Madaxweynaha oo waxba kama jiraan ku tilmaamay in tirada Ciidamada xoogga dalka la yareynayo
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in wararka sheegaya in la xadidayo ciidamada xoogga dalka, laguna koobayo kaliya 18-kun askari, kaddib markii dhowaan Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ay mooshin ka keeneen qorshaha Amniga Qaranka ee ay ku heshiiyeen Madaxda dowladda federaalka iyo Maamul goboleedyada.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in ujeedka aanu aheyn ciidan la yareynayo ama ciidan la eryayo, waxaa uu tilmaamay in inta awooda iyo tabarta tahay ay ku xiran tahay.
“Ciidankeena ma ahan 18-kun ee askari, ee ugu yaraan weeyaan, tabarteena intee ay tahay ayay ku xiran tahay, qof la ruqseynayo ama ciidan la dhimayo ma jiraan, ciidankii horay u jiray ayaa howl gelineynaa”ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dalka uu ku jiro xaalad dagaal, isla markaana ay cid walba u baahan yihiin oo gacan ka geysata xoreynta dalka, isagoo meesha ka saaray xadidnaanta la sheegay in Ciidamada la saaray.
“Aniga oo ah Taliyaha Guud ee Ciidamada, aniga ayay i hoos yimaadaan ciidamada, waxaa iga go’an sidii aan ciidamada oo isku dhaf ah u dhisi laheyn oo aan qabiil aheyn”ayuu yiri Madaxweynaha.
Xildhibaanada Baarlamaanka ayaa dhowaan mooshin ka keenay qorshaha Amniga Qaranka oo ay ku jirto dhismaha Ciidamo gaaraya 18-kun askari, kaasoo la horgeynayo shirka London.